Nezve Outlook Yemunhu Mafolda (PST) Faira
musha > Products > DataNumen Outlook Repair > Nezve Outlook Yemunhu Mafolda (PST) Faira
Iyo yemafaira faira, ine faira yekuwedzera ye .PST, inoshandiswa nemhando dzakasiyana dzeMicrosoft yekutaurirana zvigadzirwa, zvinosanganisira Microsoft Exchange Client, Windows Messaging uye neshanduro dzese dzeMicrosoft Outlook. PST ndicho chidimbu che "Yega Yekuchengetedza Tafura".
ZveMicrosoft Outlook, zvinhu zvese, zvinosanganisira mameseji etsamba, maforodha, posts, kugadzwa, kukumbira musangano, kutaurirana, zvinyorwa zvekuparadzira, mabasa, zvikumbiro zvebasa, majenali, manotsi, nezvimwewo zvinochengetwa munharaunda mune inoenderana .pst faira, iyo inowanzo kuve mune yakatsanangurwa faira.
dhiraivha: WindowsApplication DhataMicrosoftOutlook
dhiraivha: WindowsProfilesuser zitaLocal SettingsApplication DataMicrosoftOutlook
dhiraivha: Zvinyorwa uye Zvimiro mushandisi zitaMagariro ZvirongwaKushandisa DhataMicrosoftOutlook
dhiraivha: Zvinyorwa uye Zvirongwa zvemushandisi zitaApplication DhataMicrosoftOutlook
ZveWindows Vista kana 7, dhairekitori iri:
dhiraivha: Zita revashandisiAppDataLocalMicrosoftOutlook
ZveWindows 8, dhairekitori iri:
dhiraivha: Vashandisi AppDataLocalMicrosoftOutlook
dhiraivha: Vashandisi KutendereraLocalMicrosoftOutlook
Iwe unogona zvakare kutsvaga iyo faira "Outlook.pst", iro zita rekutanga reiyo Outlook .pst faira, mukomputa yako yemuno kuti uwane iko iko kwefaira.
Zvakare, iwe unogona kushandura iko iko kweiyo PST faira, kuita backup yayo, kana kugadzira akawanda PST mafaera ekuchengetedza akasiyana zvirimo.
Sezvo data rako rese rekutaurirana neruzivo zvakachengetwa muPST faira, zvakakosha kwazvo kwauri. Kana iri kusvibiswa nezvikonzero zvakasiyana siyana, isu tinokurudzira zvikuru kuti ushandise DataNumen Outlook Repair kudzoreredza data rese mairi.
Microsoft Outlook 2002 uye shanduro dzekare dzinoshandisa yekare PST faira fomati ine saizi saizi muganho we2GB, uye inongotsigira ANSI zvinyorwa encoding. Iyo yekare PST faira fomati inonziwo iyo ANSI PST fomati kazhinji. Kubva Outlook 2003, imwe PST faira fomati yakaunzwa, iyo inotsigira mafaera akakura se20GB (uyu muganho unogona zvakare kuwedzerwa kusvika ku33TB nekugadzirisa registry) uye Unicode zvinyorwa encoding. Iyo itsva PST faira fomati inonzi iyo Unicode PST fomati kazhinji. Zviri nyore kudaro chinja ma PST mafaera kubva kune yekare ANSI fomati kuenda kune nyowani Unicode fomati na DataNumen Outlook Repair.
Iyo PST faira inogona kuverengerwa ne password kuti uchengetedze zvakavanzika ruzivo irwo. Nekudaro, zviri nyore kwazvo kuita shandisa DataNumen Outlook Repair kutyora dziviriro pasina kuda iwo ekutanga mapassword.